ABS, HIPS, PMMA Refrigerator Plate, Sanitaryware Plate Extrusion Line - China ABS, HIPS, PMMA Refrigerator Plate, Sanitaryware Plate Extrusion Line Mutengesi, Factory -Jwell
ABS, HIPS, PMMA Firiji Plate, Sanitaryware Plate Inowedzera Mutsara
ABS, HIPS, PMMA Firiji Plate, Sanitaryware Plate Inowedzera Mutsara:
JWELL inopa inotungamira yeplate extrusion mitsara ine hombe kuburitsa uye yakaderera simba kudyiwa, iyo mitsara yakagadzirirwa neakakomberedzwa zvinhu kudyisa system uye otomatiki stacker, yayo otomatiki yekugadzira basa inoderedza mutengo wekugadzirisa uye kugadzirisa chigadzirwa mhando zvakanyanya. Iyi extrusion tambo inozivikanwa muvatengi vedu.
ABS - PS-MAHURE
Firiji bhodhi: Iyo ine yakafara mashandisirwo mukugadzirwa kwefriji musu uye yemukati nduru, dhirowa, mvura yekupa, etc.
Sanitaryware ndiro: Inoshandiswa zvakanyanya mumunda wezvigadzirwa zvekugezesa, senge bhavhu, iyo yekugezera kabati, imba yemhepo, yekuwachira ndiro, nezvimwe.
Kushambadzira bhodhi: Iri bhodhi rinonyanya kushandiswa mukutungamira bhodhi, muchina chiratidzo, kushambadzira kushongedza, kwemukati kushongedza uye zvichingodaro.
Ndiro yemukwende: Inonyanya kuiswa mumunda wekutora-mabara mabhokisi, makesi emikwende, mabhegi ekuzorora, nezvimwe.
Car ndiro: Inonyanya kushandiswa kugadzira misoro yemota nemabhazi, mabhodhi echiridzwa, backrest, madhoo emota, mafuremu ewindo, makomba emidhudhudhu, mota dzegorofu, et